Qorshe ay Dadka shaqo la'anta ku heli karaan Shaqo ama Waxbarasho oo Dowlada Sweden soo bandhigtay
HomeWararka Maanta SomaliskaQorshe ay Dadka shaqo la’anta ku heli karaan Shaqo ama Waxbarasho oo Dowlada Sweden soo bandhigtay
September 28, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Photo Nabizadeh / TT
Dad badan oo shaqo la’aan ah ayaa fursad uhelaya inay wax ku bartaan kaalmada ay helaan ee Xafiiska Shaqada, sida taageerada waxqabadka. Sidaas waxaa tiri wasiirka shaqada Eva Nordmark iyo wasiirka waxbarashada Anna Ekström oo maanta shir jaraa’id qabtay.
qorshaha dowlada ayaa ah in dadka lacagta ka qaata xafiiska shaqada ay wax bartaan iyagoo helaya lacagtooda halkii ay diri lahaayeen warbixin ku aadan shaqo raadintooda bil kasta.
Waxaa loo oggolaan doonaa inay waxbartaan illaa hal sano, si markaas ay awood ugu yeeshaan inay ka shaqeeyaan shaqooyinka ay ka jiraan shaqaale la’aan, tusaale ahaan kaaliyaha daryeelka.
Sababta ayaa ah in shaqooyin badan la waayay xilligii dhibaatada corona aysan soo laaban doonin, isla markaana hagaajinta suuqa shaqada ay xawaare ku socoto oo dowlada ka shaqeeneyso.
– Markii hore, waxaa jiray shuruudo ah in aad shaqo la’aan ahayd ugu yaraan lix bilood ka hor intaadan ka qayb qaadan. Hadda waxay sidoo kale fursad u tahay dadka dhowaan shaqo la’aanta noqday, ayay tidhi.
– Tani waxay khusaysaa hal sano oo waxbarasho waqti-buuxa ah oo tusaale ahaan waxbarasho-gaaban, koorsooyin waxaa ka mid ah kaaliyeyaasha daryeelka iyo darawallada xirfadda leh, ayay Tidhi Nordmark.
Isbeddelada ayaa dhaqan galaya Nofeembar 1.